ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကံဆိုးလှပြီထင်ရင်ဒီလူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ – Cele Channel
Posted on January 31, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
တစ်ခါတစ်ရံ ပေါင်မုန့်မီးကင်ရင်း တူးသွားတာမျိုးတွေ၊ ဘတ်စ်ကား လွတ်သွားတာမျိုးတွေ၊ မိုးမိတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပြီဆိုရင် သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာဟာ ကံဆိုးလှပြီ ထင်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကတော့ သင့်ထက်ကံဆိုးနေတတ်တာကို ဒီပုံတွေက ပြနေပါလိမ့်မယ်။
ဒီလူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကံဆိုးမှုတွေကို အကောင်းဘက်က ကြိုးစားမြင်ပြီး ရယ်စရာအနေနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့တွေက အချိန်မတော်မှာ ခဏမှေးအိပ်မိပြီး တချို့က လက်ထဲက မုန့်ကိုတောင် ငှက်လုစားတာခံရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ငိုအားထက် ရယ်အားသန် လွဲချော်မှုတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ စာလေးတွေနဲ့အတူ ဖော်ပြပေးထားတယ်နော်။
နံရံကပ်ဗီရိုတွေ ကွာကျသွားတာတစ်ခုတည်းနဲ့ကို မီးဖိုချောင်တစ်ခုလုံး ဗြောင်းဆန်ကုန်ပါပြီ
ဒီတစ်ယောက်ကတော့ သူစားခါနီးရေခဲမုန့်ကို စင်ရော်ငှက်က ဝင်လုတာကို အမိအရရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
ဒီလူကတော့ ရုံးမသွားခင် ကော်ဖီနောက်တစ်ခွက် လိုနေပြီထင်ပါတယ်။ ဖိနပ်နှစ်ဖက်ညီအောင်ရှာဖို့ ဒီလောက်မခက်ခဲသင့်ပါဘူး
ဒီတစ်ယောက်ကတော့ ပေါင်ပေါ်မှာ မုန့်ပန်းကန်တင်ပြီး နေရောင်ထွက်ခံရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့မိလို့ပါ
ရွက်ဖျင်တဲ ထိုးပြီးပြီးချင်းမှာ မြေကြီးနဲ့ အခိုင်အမာ ငုတ်ရိုက်ပြီး တွယ်ထားသင့်ကြောင်း ဒီပုံက သက်သေပြနေပါတယ်
မျက်နှာကို အသားညိုစေတဲ့ စပရေးဖျန်းထားချိန်မှာ ဝမ်းမနည်းသင့်ကြောင်း ဒီမိန်းကလေးရဲ့ ပုံက ပြနေပါတယ်
ပင့်ကူကို နှိမ်နင်းဖို့ ဒီအင်းဆက်စပရေးဘူးထက် အားပြင်းတဲ့အရာ လိုနေပြီထင်ပါတယ်
ဒီလူကတော့ ဖျာကို မီးပူတိုက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်
ဖန်ခွက်ကျကွဲတာနဲ့ လုံလောက်နေပါပြီ။ ဖန်ခွက်နဲ့ အိမ်သာခွက်ကို ထပ်ခွဲတာကတော့
ဒီကားပိုင်ရှင်ကတော့ အရသာရှိတဲ့ ရေခဲမုန့်ကို စားရမယ့်အစား ကားကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပါတော့မယ်
မြစ်ကြီးနား မှာနေတဲ့ အဘိုးအိုတစ်ဦးဟာ ရန်ကုန်ကသားဆီကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်
Posted on October 31, 2017 Author Cele
မြစ်ကြီးနား မှာနေတဲ့ အဘိုးအိုတစ်ဦးဟာ ရန်ကုန်ကသားဆီကိုဖုန်းဆက်ပါတယ် “နားထောင်ငါ့သား… မင်းအမေနဲ့ငါနဲ့ ကွာရှင်းတော့မယ်… လေးဆယ့်ငါးနှစ်လောက် ဒုက္ခခံလာရတာ ငါ့အတွက်တော်သင့်ပြီ…” “အဖေ… ဘာတွေပြောနေတာလဲ…” သားဖြစ်သူက ထိတ်လန့်တကြားအော်ပြောလိုက်တယ်… “ငါတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နည်းနည်းမှထပ်မတွေ့ချင်တော့ဘူး…” အဘိုးအိုက ဆက်ပြောတယ်… “ငါသူ့မျက်နှာကိုမြင်ရမှာလည်း စိတ်ကုန်တယ်… ပြီးတော့ ဒီအကြောင်းတွေပြောရမှာလည်း စိတ်ကုန်တယ်… မော်လမြိုင်က မင့်အမဆီကို မင်းပဲဖုန်းဆက်ပြောလိုက်တော့…” လို့ ပြောပြီးတော့ အဘိုးအိုဖုန်းချသွားတယ်…. သားဖြစ်သူက စိုးရိမ်လာတာပေါ့… ဒါကြောင့် သူ့အမဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်…. သူ့အမက “ဘုရားရေ… သူတို့ကွာရှင်းတော့မယ်ဟုတ်လား…” လို့ဆိုပြီးတော့ သူ့အဖေဆီကို ချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ပါတယ်… “အဖေတို့ ဘာလို့ကွာရှင်းရမှာလဲ… ဘာမှလျှောက်လုပ်မနေနဲ့… သမီးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက် ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ မနက်ဖြန်လေယာဉ်နဲ့ထွက်လာမယ်… သမီးတို့မရောက်မချင်း ရှေ့နေလည်းမခေါ်နဲ့… ဘာစာရွက်စာတမ်းမှလည်းမလုပ်နဲ့… သမီးပြောတာကြားတယ်မလား… ဒါပဲ” ဆိုပြီး ဖုန်းချသွားပါတယ်… အဘိုးအိုက […]
သစ်​ပင်​ကြီး​အောက်​မှာ သမီးရည်းစားနှစ်ဦး ချိန်းတွေ့နေကြသည်
Posted on November 23, 2017 Author Cele
သမီးရည်းစားနှစ်ဦး ချိန်းတွေ့နေကြသည်။ “ချစ် …. ကိုကို ချွတ်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ကွာ ……..” “ဟာ ကိုကိုကလဲ ဒီတိုင်းပဲကြည့်ကွာ …..” “လုပ်ပါ ချစ်ကလဲ … ကိုကို တစ်ခါမှ အသေအချာ မမြင်ဖူးသေးလို့ပါ။ ဗွီဒီယိုထဲမှာပဲမြင်ဖူးတာပါ။ တကယ်ပါ။ ဘုရားစူး” “ဟာကွာ …. ကိုကိုကလဲ မေမေသိရင် အဆူခံရမှာနော် …. တစ်ခါတစ်လေ အိမ်မှာချွတ်ထားရင်တောင် မေမေကကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး” “ဘယ်သူမှမသိပါဘူး ချစ်ရာ …. ဒီနားမှာ ကိုယ်တို့ပဲရှိတာကို” “ဟွန်း ! ဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေရင်လည်း ကိုကို့ဖာသာချွတ်ပြီးကြည့်တော့။ ဒါပေမယ့် ခဏပဲရမယ်နော် ….. ခုခေတ်မှာ ချောင်းရိုက်တာတွေက ခပ်များများရယ်။ လန့်နေရတယ်။” “အင်းပါ …. ခဏပဲကြည့်မှာပါ။” ကောင်မလေးရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းရရော ကောင်လေးက သေသေချာချာ ချွတ်ကြည်တယ်။ ပြီးတော့ အနှီလို […]
အွန်လိုင်းမှာ လူကြည့်လူပြောများနေတဲ့ မင်္ဂလာဆောင် အဆန်းကြီး
Posted on November 10, 2017 Author Cele
မင်္ဂလာဆောင်က အဆန်းကြီးနော် ကောလင်းကလို့ သိရပါတယ်။ Video @ Original Uploader
(၁၁)နှစ်ရွယ် ကောင်မလေးကို ကျောင်းစောင့်ကအကြိမ်ကြိမ် မုဒိမ်းကျင့်